မြေငလျင်ဆိုင်ရာဗဟုသုတ « MMWeather Information BLOG
၁၈၃၉ အင်းဝငလျင်ကြီး အပိုင်း-၂
By mmweather.ygn, on September 3rd, 2012%
ဦးတင့်လွင်ဆွေ၏ ဘလော့ post မှ ကူးယူ၍ ဖေါ်ပြပါသည်။ အောက်ပါလင့်မှ မူရင်း post သို့ ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုပါရန် … http://tintlwinswe.blogspot.com/2012/09/1839-innwa-earthquake-part-2.html
၁၈၃၉ အင်းဝငလျင်ကြီးနှင့် ပါတ်သက်၍ Oldham (1883) ၏ မှတ်တမ်းများအရသာ သိရသည်။ လွန်ခဲ့သော ရက်အနည်းက Facebook လက်ဆင့်ကမ်းမှုဖြင့် အင်းဝငလျင်ကြီးနှင့် ဆက်စပ်သော ဓါတ်ပုံအချို့ ရရှိသည်။ နန်းမြင့်မျှော်စင်နှင့် ရွှေစည်းခုံစေတီတော် အထက်ပိုင်းပြတ်ပုံ ဖြစ်သည်။
ပုံ (၁) ၁၈၃၉ အင်းဝငလျင်ကြီးကြောင့် ပြိုပျက်သွားသော အင်းဝ နန်းမြင့်မျှော်စင်။ Watch tower of Innwa damaged by the 1839 earthquake. (From facebook share)
ပုံ (၁) ကို . . . → Read More: ၁၈၃၉ အင်းဝငလျင်ကြီး အပိုင်း-၂
Leaveacomment မြေငလျင်, မြေငလျင်ဆိုင်ရာဗဟုသုတ 1839, innwa-earthquake ငလျင်တစ်ခု၏ အင်အား ဘယ်လောက်ပြင်းသလဲ?
By mmweather.ygn, on June 5th, 2012%
ငလျင်တစ်ခု လှုပ်ခတ်ရာတွင် ပြင်းအား ရစ်ချစ်တာ စကေး ၄ ရသည် ဆိုပါစို့၊ အကယ်၍ ပြင်းအား ၄ လှုပ်ခတ်မည့် အစား ပြင်းအား ၇ အဆင့်လှုပ်မည်ဆိုလျှင် ပြင်းအား ၇ အဆင့်လှုပ်သည့် ငလျင်သည် ပြင်းအား အဆင့် ၄ ထက် – အဆပေါင်း ၁၀၀၀ ပိုမို ပြင်းထန်ကြောင်း တွက်ချက် ယူနိုင်ပေသည်။ ထိုကဲ့သို့ တွက်ချက်ရန် အောက်ပါ ညီမျှခြင်းကို မိမိ လိုအပ်သည့် ကိန်းဂဏန်းများဖြင့် အစားထိုးတွက်ချက်ရယူနိုင်ပါသည် –
A magnitude 8.7 earthquake is 794 times BIGGER onaseismogram than . . . → Read More: ငလျင်တစ်ခု၏ အင်အား ဘယ်လောက်ပြင်းသလဲ?
Leaveacomment သိပ္ပံဆိုင်ရာဆောင်းပါးများ, မြေငလျင်, မြေငလျင်ဆိုင်ရာဗဟုသုတ ငလျင်ပြင်းအား နှိုင်းယှဉ်တွက်ချက်ခြင်း ကြိုတင်ခန့်မှန်းရန် ခက်ခဲသော သဘာဝဘေးအန္တရာယ်များ
One comment မြေငလျင်, မြေငလျင်ဆိုင်ရာဗဟုသုတ, ကြိုတင်ကာကွယ်ပြင်ဆင်ခြင်း earthquake, ငလျင် Google Chrome မှ ငလျှင်သတင်းကို စောင့်ကြည့်ခြင်း
By mmweather.ygn, on January 20th, 2012%
Google Chrome browser ၏ webstore မှ Earth Notifier Web Application ကို မိတ်ဆက်ပေးလိုပါသည်။
အထက်ပုံသည် Google Chrome မှ Earthquake Notifier web application ဖြစ်ပြီး https://chrome.google.com/webstore တွင် ရယူနိုင်ပါသည်။ Earthquake Notifier အပြင် အခြားသော web application များလည်း ရယူထည့်သွင်းထားနိုင်ပါသည်။
Earthquake Notifier သည် နေ့စဉ် ဖြစ်ပေါ်လျှက်ရှိသည့် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှ ငလျင်လှုပ်ခြင်းများကို အလိုအလျှောက် update လုပ်ပေးပြီး လှုပ်ရှားမှု အသစ်ဖြစ်ပေါ်တိုင်း အသံဖြင့် အချက်ပေးပါသည်။ Google Chrome Browser အသုံးပြုသူများအတွက် စမ်းသပ်သုံးစွဲသင့်ကြောင်း အကြံပြု . . . → Read More: Google Chrome မှ ငလျှင်သတင်းကို စောင့်ကြည့်ခြင်း
2 comments မြေငလျင်, မြေငလျင်ဆိုင်ရာဗဟုသုတ တစ်ကျော့ပြန်လှုပ်နိုင်ခြေရှိလာသည့် ပဲခူးငလျင်ကြီး
Leaveacomment မြေငလျင်, မြေငလျင်ဆိုင်ရာဗဟုသုတ, ကြိုတင်ကာကွယ်ပြင်ဆင်ခြင်း earthquake, ဆောင်းပါး, မြေငလျင် ၁၉၃ဝ ပြည့်နှစ် ပဲခူးမြေငလျှင်ကြီး
By mmweather.ygn, on September 9th, 2010%
၂ဝဝ၉ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ ၂၁ ရက်နေ့က http://mmweather.wordpress.com မှာ တင်ထားတဲ့ “၁၉၃ဝ ခုနှစ် ပဲခူးငလျှင်အကြောင်း” ကို ပြန်လည်ကူးယူပြီး အနည်းငယ်ပြင်ဆင်ကာ ဖေါ်ပြပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီအချိန်က ကျနော် ဒီဆောင်းပါးကို စတင်ရေးသားခဲ့တော့ “မြန်မာနိုင်ငံမှာ ပဲခူးမြို့ငလျှင်လှုပ်ခဲ့တာနဲ့ ပတ်သက်လို့ ရှာဖွေတင်ပြပေးပါရန် တောင်းဆိုချက်တွေကြောင့် ကျနော်လက်လှမ်းမီသလောက် ရှာဖွေရေးသားပေးလိုက်ပါတယ် …. ဒီပို့စ်နဲ့ပတ်သက်လို့ မပြည့်စုံတာနဲ့ မှားယွင်းမှုများရှိနေရင် ခွင့်လွှတ်ဖတ်ရှုပေးကြပါရန် ဦးစွာ မေတ္တာရပ်ခံလိုပါတယ် ခင်ဗျား” လို့ အစချီရေးသားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ တချို့သတင်းများကို အဲသည်ခေတ်က ထုတ်ခဲ့တဲ့ သတင်းစာဖြတ်ပိုင်းများကတစ်ဆင့် လိုက်လံ ရှာဖွေပြီး ဘာသာပြန်ဆိုရေးသားခဲ့ရတာမို့ တကယ်မှတ်တမ်းပြုစုထားတဲ့ အခြေအနေတွေနဲ့ လွဲနေတာတွေရှိရင်လဲ ဒီဆောင်းပါးရဲ့ comment နေရာမှာ ပြုပြင်ရေးသား အကြံပြုပေးကြစေချင်ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံ ပဲခူးမြို့မှာ . . . → Read More: ၁၉၃ဝ ပြည့်နှစ် ပဲခူးမြေငလျှင်ကြီး
3 comments ဆောင်းပါး, မြေငလျင်ဆိုင်ရာဗဟုသုတ 1930 Pegu Earthquake, ဆောင်းပါး, မြေငလျင် Copyright © 2017 MMWeather Information BLOG Log in - All Rights ReservedPowered by WordPress & the Atahualpa Theme by BytesForAll. Discuss on our WP Forum